ISundowns iqinise iqembu elivele liyinqanawe, isazobusa kuleli?
July 9, 2021 Impempe.com
Abadlali abasha beMamelodi Sundowns
IMamelodi Sundowns seyithule abadlali abane abasha eqinisa ngabo iqembu njengoba ilungiselela isizini entsha. ISundowns kuyacaca isazimisele nokuqhubeka ngokuzenzela kwamanye amaqembu kwiDStv Premiership njengoba iqinise iqembu elivele libophele izibaluli.
Leli qembu laseChloorkop liwine iligi ihlandla lesine kulandelana – nobese kungokuka-11 sekukonke – ngesizini ephelile. Kodwa kuyacaca ayizimisele ukusiyeka lesi sicoco futhi cishe ifuna nokwenzeza ezinye ngaphezulu.
Phambili kubadlali abasha ngumgadli waseSlovakia uPavol Šafranko osuka eqenjini laseRomania iSepsi OSK SF. UŠafranko ushaye amagoli ayisishiyagalolunye, wakhela ozakwabo ayisithupha emidlalaweni engu-33 ngesizini edlule.
Uzokwengeza kubagadli abasezingeni iSundowns evele ihlome ngabo oKermit Erasmus, Peter Shalulile noGift Motupa phakathi kwabanye. Kuzothatha amehlo ukubona ukuthi uyakwazi yini ukusheshe abambe isitayela njengoba kwenza uShalulile.
ISundowns iphinde yaqinisa nasemuva ohlangothini lwesinxele ngoDivine Lunga waseZimbabwe obekwiGolden Arrows ngesizini edlule. ULunga ubengomunye wabadlali abenze kahle kwi-Arrows ngesizini edlule njengoba yaze yagcina iphelele endaweni yesine kwilogi.
Lo mdlali oneminyaka engu-26 uyinsika naseqenjini lesizwe laseZImbabwe futhi kumanje ukulo njengoba lidalla kwiCosafa Cup eGqeberha. IBrazilians iphinde yayoxebula nakwiBloemfontein Celtic, ithatha uNeo Maema okhombise ukuba nekhono elihle ngesizini ezayo.
FUNDA NALA: IChiefs isibaqinisekisile ebasayinile, kuseza abanye
UMaema ubeyiphela endlebeni ezitobheni zamaqembu ePremiership kanti nenethi uyayiboniswa la ingakhona. Nokho kuzomele asebenze kanzima ukuthola ijezi kwiSundowns njengoba ezolibanga nabadlali asebezakhele igama kuyo oThemba Zwane noGaston Sirino.
Ngemuva kwalaba kusekhona oGrant Magerman noLesedi Kapinga nabo abasalinde ithuba kuleli qembu. Kodwa uma kubhekwa ikhono alikhombisile ngesizini edlule, cishe ngeke kumthathe isikhathi eside ukuthi azibekisele indawo eqenjini eliqala imidlalo.
Laba badlali abane bafikele phezu kukaGrant Kekana ojoyine iSundowns esuka kwiSuperSport United ngesonto elidlule. UKekana udlala emuva ezindaweni ezehlukene.
Previous Previous post: USekgota unikwe inombolo edunyiswe uShabba kwiChiefs
Next Next post: URakhale uthembisa ingcwenga adume ngayo kwiSekhukhune